कोराेनाविरुद्धको खोपको पहिलो खेप बेलायत आइपुग्यो - गोकर्णेश्वर खबर
गोकर्णेश्वर खबर१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १८:२१ मा प्रकाशित (१ महिना अघि) ९९ पाठक संख्या
काठमाडौं, मंसिर १९ गते । कोभिडविरुद्धको फाइजर र एनबायोटेकको खोपको पहिलो खेप (लट) बेलायत आइपुगेको छ । गोप्य स्थलमा उक्त खोप राखिएको छ । बेलायतमा अस्पतालको खोप केन्द्रहरुमा वितरणका लागि तयारी गरिएको छ ।
बेलायतमा आपूर्ति गरिएको फाइजर र एनबायोटेकको कोभिडविरुद्धको खोप बेल्जियममा उत्पादन गरिएको छ । र यूरो सुरुङ्ग मार्ग मार्फत् बेलायत पुर्याइएको छ ।
बेलायतको अस्पतालहरुमा पहिलेदेखि खोप भण्डारणका लागि आवश्यक तापक्रमसहितको सुबिधा विद्यमान छन् । फाइजर र एनबायोटेकको खोप भण्डारण तथा आपूर्तिका लागि माइनस ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रम आवश्यक पर्छ । पहिलो लटमा आपूर्ति गरिएको खोप अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी, एनएचएस कर्मचारी र बिरामीलाई लगाइनेछ ।
बेलायत फाइजर र एनबायोटेकको खोप लगाउन अनुमति दिने पहिलो राष्ट्र हो । गत् बुधबार बेलायतको खोप नियमनकारी निकायले उक्त अनुमति दिएको हो ।
बेलायतको खोप अनुमति दिने हतारिएको निर्णयको अमेरिकामा सङ्क्रामक रोग विज्ञसमेत रहनुभएका डा. एन्थोनी फौसीले आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँले बेलायतले खोप लगाउने निर्णय गर्दा आवश्यक साबधानी नअपनाएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । बेलायतको उक्त हतारिएको निर्णयले सर्वसाधारण सहजै खोप लगाउन स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । तर बेलायतले उक्त प्रतिक्रियाको रक्षा गर्दै खोप सुरक्षित र प्रभाबकारी रहेको दाबी गरेको छ । पछि डा. फौसीले समेत असमझदारीमा आफूले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको र त्यसका लागि क्षमा चाहेको बताउनुभयो ।